Reny - Bezzia | Bezzia
Meteza ho reny Fotoana lehibe eo amin'ny fiainan'ny vehivavy izany, iray amin'ireo fotoana mahafinaritra indrindra amin'ny fiainany nefa koa iray amin'ireo tompon'andraikitra tompon'andraikitra indrindra. Noho izany antony izany, avy any Bezzia dia te-hanome torohevitra anao izahay mba hanatanterahana an'io fomba mahazatra io: manomboka amin'ny fitondrana vohoka sy ireo fisalasalana izay mety hipoitra mandritra io fotoana io ka hatramin'ny fanabeazana ny ankizy rehefa tsy dia kely loatra izy ireo.
Ao amin'ny fizarana reny Hisy lohahevitra mahaliana maro ho an'ny vehivavy manan-janaka: inona no sakafo hohanina na tsy hohanina mandritra ny fitondrana vohoka, ny maha-zava-dehibe ny filalaovana amin'ny zazakely, ny toro-hevitra mandritra ny fotoana tsy netezan'ny nify na ny fomba fitondran-tena raha manan-janaka mihoatra ny iray ianao.
Toy izany koa, tsy hisy ihany ny toro-hevitra sy ny fampahalalana ilaina, fa hiezaka ny hisaintsaina ny tontolo sarotra amin'ny maha-reny. Toe-javatra vaovao ho an'ny olona maro nefa izany dia lasa iray amin'ireo fotoana manandanja indrindra amin'ny fiainana.
Ny fahadiovan'ny orona amin'ny zazakely dia andraikitra tokony hataon'ny ray aman-dreny am-pitandremana sy malefaka. Io dia…
ny Maria Jose Roldan hace Herinandro 3 .
Ireo aretina ateraky ny vavony sy ny tsinay dia mihabetsaka ary mahazatra eo amin'ny ankizy ...
ny Maria Jose Roldan hace Herinandro 4 .
Ara-dalàna tokoa raha ny ankizy amin'ny taona iray dia tena mora resin'ny nofy ratsy. Ny marina dia fantatro ...
Fahadiovana akaiky mandritra ny fitondrana vohoka
Na eo aza ny ahiahin'ireo vehivavy bevohoka maro, ny fofon'ny vatana matanjaka, indrindra ireo faritra akaiky, dia zavatra ...
Migraine amin'ny ankizy sy ny tanora
Ny data dia manondro fa ny migraine no karazana aretin'andoha mahazatra indrindra amin'ny planeta iray manontolo. Ao…
Tena ara-dalàna raha maro ny vehivavy 48 ora aorian'ny fiterahana, mijaly am-bohoka mafy ao am-bohoka….
Tsy misy olona miady hevitra amin'ny hoe tsy mora na tsotra ny manabe zaza. Ny dingana rehetra ...
Misy heriny eo amin'ny tanora ve ny tsy fisian'ny ray aman-dreny?
Fanontaniana sy valiny momba ny fahamaotiana